Dhismaha wajigii koowaad ee Dekeda Berbera ayaa ku dhaw dhamaad amb. barkhad kaariye – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dhismaha wajigii koowaad ee Dekeda Berbera ayaa ku dhaw dhamaad amb. barkhad...
Dhismaha wajigii koowaad ee Dekeda Berbera ayaa ku dhaw dhamaad amb. barkhad kaariye
Wejiga koowaad ee ballaarinta wejiga koowaad ee Dekeda caalamiga ah ee magaalada Berbera ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo sannadkan, Ergada Joogtada ah ee Diblomaasiyiinta Somaliland ee Itoobiya kuxigeenka Amb. Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa u sheegay The Herald ee Itoobiya.
Wuxuu ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyay wargayska ‘The Ethiopian Herald’, in mashruuca oo dhan la dhamayn doono dhamaadka sanadka soo socda isla markaana ay bilaabi doonaan hawlgal isla muddadaas. Mashruucan ujeedada badan leh ayaa qiimihiisu yahay 442mln. Doolar. ”
“Heshiiska saddex geesoodka ah ee saddex geesoodka ah ee Dekadda Berbera, Itoobiya waxay leedahay saami dhan 19 boqolkiiba, shirkadda DP World waxay haysataa 51 boqolkiiba, halka Somaliland ay harsan tahay 30 boqolkiiba. Waxa kale oo jira aag badan oo ah free zon oo bilaash ah oo ka madax bannaan Berbera kaas oo kor u qaadi doona shaqada dekeda sidoo kale, ”ayuu raaciyay.
Somaliland waa goob ku habboon oo lagu maal-gashado, ayuu yidhi isagoo intaas ku daray in xaruntii daboolaysa burburka 400-mitir iyo 250, 000 mitir laba-jibbaaran la rajaynayo inay u adeegto hawlo badan ayna ka ciyaaraan door lama huraan ah xagga kobcinta xidhiidhka dhaqaale ee gobolka.
Isla calaamaddaasi, dekeddu waxay u furi doontaa marin kale oo dhinaca badda ah Itoobiya waxayna faa’iidooyinkeeda u leedahay ganacsiga dhoofinta dhoofinta waa mid aad u weyn. Waxay sidoo kale ka caawineysaa Itoobiya iyo Somaliland inay ku lug yeeshaan ganacsi isu dheellitiran oo ay u adeegaan danahooda labada dhinac, ”ayuu raaciyay.
Wuxuu yidhi, “Waxay shaqo u abuurtaa dhalinyarada labada qaran. Soddon iyo laba boqolkiiba wejiga koowaad ayaa hadda la dhammeystirey. Dekadda ayaa maamuli doonta maraakiibta waaweyn ee ka yimaada daafaha adduunka. Intaas waxaa sii dheer, waxay gacan ka geysan doontaa is dhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika iyo bariga Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika.
Waqtigan xaadirka ah, dhinaca kale, waxaa jira laba geesood oo isku xiraya isku xidhka labada dal oo 12km kii ugu horreeyay uu jaray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi usbuucii hore. In kasta oo ujeeddadu tahay mid dhaqaale, waxay kordhinaysaa qulqulka dadka dalxiisayaasha ah ee tagaya Itoobiya iyo Somaliland, ”
Wuxuu carabka ku adkeeyay in maalmahan Somaliland ay isu badalayso sidii ay u noqon laheyd suuq maalgashi ayna ku guuleysato quluubta iyo maskaxda maal gashadayaasha waqtiba waqti. Kadib fursadaha maalgashi ee soo jiidashada leh oo heer qaran ah, qof walba wuxuu ku dhegan yahay muhiimadda ay leedahay in la maalgashado Somaliland.
xigasho Herald-ka itoobiya 12,2020
Previous articlexaalada covid19 dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
Next articleLooma baahna inay somaliland dhabar jabiso mucaaradka somaliya
Akhriso: Nuxurka Khudbaddii Madaxweyne Farmajo uu ka jeediyay New York
Warbixintii ugu danbeysey covid19 Soomaaliya